प्रकाश सपुतको 'गलबन्दी' ले बनायो अर्को नयाँ रेकर्ड !
प्रकाश सपुतको ‘गलबन्दी’ ले बनायो अर्को नयाँ रेकर्ड !
काठमाडौँ जेठ २८ , हाल काठमाडौँको तापक्रम २६ डिग्रीको हाराहारीमा छ। यस्तै, तराईका भुभागहरुमा त उखरमाउलो गर्मी चढेको छ। यस्तो गर्मीमा तपाईलाई गलबन्दी या पछ्यौरीको झ झल्को आउछ कि आउदैन ? तर यहाँ त पछ्यौरी मन पराउने पनि एक करोड पुगिसकेका छन्। प्रसङ्ग हो ,प्रकाश सपुत र शान्ति श्री परियारको लोकदोहोरी गित ‘गलबन्दी’ को। गलबन्दी गीतले दर्शक श्रोताको मन जित्दै सार्वजनिक गरेको १८ दिनमा युट्युवमा एक करोड भ्युज बटुल्न सफल भएको छ। यसका साथै ‘गलबन्दी’ नेपाली गित संगीतको ईतिहासमा सबै भन्दा कम समयमा करोड भ्युज बटुल्न सफल गित बन्न पुगेको छ। यस अघि अशोक दर्जीको ‘ धन बिनाको मन ठुलो ‘ वोलको गीतले २९ दिनमा एक करोड भ्युज बटुल्न सफल भएको थियो।
गलबन्दी गत मे २५ तारिखका दिन युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको थियो। सार्वजनिक गरिएको पहिलो दिनबाट नै चर्चा बटुलेको उक्त गितले लगातार दुई हप्ता सम्म युट्युब ट्रेन्डिङको नम्बर वानमा पर्न सफल भएको थियो। गलबन्दीको सबै संवाद तथा वोलिचालीमा गाउले परिवेशलाई हुबहु उतारिएकोले पनि अझ सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ भने हाल हरेक संवादहरु बजारमा चलनचल्तीमा रहेका छन्। गीतको शब्द ,संगीत,आवाज र परिकल्पना समेत प्रकाश सपुतले नै गरेका हुन्।
गलबन्दी गित टिकटकमा पनि सर्वाधिक अभिनय गरिएको गित हो। गीतलाई देश तथा विदेशमा समेत अति नै रुचाईएको छ। यस अघि ‘बोल माया’ वोलको गीतबाट सर्वाधिक चर्चा बटुलेका प्रकाशले गलबन्दीलाई वोला मायाकै दोश्रो भागको रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन्। गलबन्दी टिमलाई बिगुल न्युजको तर्फबाट अझै सफलताको सुभकामना।
प्रकाशित : मङ्गलबार, जेठ २८, २०७६०६:५७